Nepalistudio » आफ्नै प्रेमीले सेक्स भिडियो युट्युबमा हालेपछि प्रेमिकाले गरिन यस्तो हर्कत आफ्नै प्रेमीले सेक्स भिडियो युट्युबमा हालेपछि प्रेमिकाले गरिन यस्तो हर्कत – Nepalistudio
आफ्नै प्रेमीले सेक्स भिडियो युट्युबमा हालेपछि प्रेमिकाले गरिन यस्तो हर्कत
उनले भनेकी छिन्, ‘यो घटनाले मेरो जिन्दगीमा हरेक क्षेत्रबाट असर पारेको छ । आगामी दिनमा पनि यसको असर मलाई परिरहनेछ ।’ पूर्व प्रेमीबिरुद्ध चार वर्षसम्म कानुनी लडाईँ लडेकी चेम्बर्सलाई यूट्यूबका संगीतकारहरुले अहिले ‘रिभेन्ज पोर्न क्याम्पेनर’ का रूपमा चिन्न थालेका छन् । उनले भनिन्, ‘मैले सुरुमा एक जना साथीबाट थाहा पाएको थिएँ कि त्यो सेक्स टेप भएको लिङ्क एकदमै भाइरल भइरहेको छ ।’
‘कसैले हाम्रो यूट्यूब च्यानलमा विभिन्न तरिकाले त्यस्तो लिङ्क शेयर गथ्र्यों । र, भन्ने गथ्र्यों– तपाईंलाई के लाग्छ ? क्रिसी चेम्बर्स रोल मोडल हो ? उनी एक बेश्य हुन् । यो भिडियो हेर्नुस्, थाहा पाउनुहुन्छ ।’ उनले अगाडि भनिन्, ‘मैले लिङ्कमा क्लीक गर्ने बित्तिकै के भएको रहेछ भन्ने थाहा पाइहालेँ । म एकदमै आश्चर्यमा परेँ । मलाई ठूलो झट्का लाग्यो । यस्तो लाग्यो कि मेरो जीन्दगी सकियो ।’
त्यो भिडियोलाई हटाउनका लागि भन्दै उनले कतिपय वेबसाइटसँग सम्पर्क पनि गरिन् । तर, केही जवाफ आएन । आखिरमा उनले वकिलको सहायता लिनै पर्‍यो । जब वकिलले सूचना पठाए, ती वेबसाइटहरुले भिडियो हटाए ।
त्यसपछि यस्ता घटनाबाट पीडित बनेकाहरु चुप लागेर बस्नुको साटो प्रतिरोध गर्न थाले ।